IMeya ithi iNkandla ifanelwe ngokugcono – Ubukhosi
Home/ Umkhandlu/IMeya ithi iNkandla ifanelwe ngokugcono
UMTHETHOSISEKELO waseNingizimu Afrika uthi bonke abantu bayalingana. Ngeshwa lesi siqinisekiso kasisho lutho ezinkulungwaneni zabantu abahlala ezindaweni zasemakhaya. Kulezi zindawo impilo ingumzabalazo nsuku zaphuma. UMkhandlu iNkandla iyingxenye yezindawo ezihlonzwe ngokuthi zingezasemakhaya. Ngokwezibalo zabakwa Statistic South Africa le ndawo inezakhamuzi eziyizi-114 416 kanti ubukhulu bayo bubekwa kumahektha ayi-1828. Lo Mkhandlu ungaphansi kweqembu Inkatha Freedom Party (IFP).
Lowo oyiMeya uMnu uThami Ntuli akazifihli izinhloso zakhe ngale ndawo nathi iyifagugu. “Ngeke uphelele umlando kaZulu ngaphandle kokubalula iNkandla. Sinenhlanhla yokuba nezindawo zomlando kanjalo nokuba yindawo lapho abantu abamqoka emlandweni bedabuka khona. Yingakho nje njengeqembu kanye noMasipala sizibophezele ekuqinisekiseni ukuthi le ndawo yethu ithola okungcono, ngoba vele ifanelwe ngokungcono,” kusho uNtuli.
IMeya ibalule izinhlelo ezithize nethe ziyisiqalo sokuhle okuzayo nokuhlose ukuthuthukisa le ndawo. “Kithi intuthutho akuyona nje ingqalasizinda kuphela kepha ihlanganisa nokuthuthuka kwabantu ngokwamakhono, ngokomoya nenhlalakahle. Kungalesi sizathu uma siletha izinhlelo zentuthuko kubantu siqinisekisa ukuthi leminxa iyaqapheleka,” kuchaza uNtuli.
Njengengxenye yokusungula amathuba emisebenzi endaweni uMkhandlu usezinhlelweni zokuthuthukiswa kwedolobha. Lokhu kwenziwa ngenhloso yokukwazi ukuheha abatshalimali nokungathi nxa kuhambe kube nomthelela omuhle emphakathini. Lobu buhle buzoza ngezindlela ezehlukene; okokuqala izitolo ezinkulu zizosondela eduze nabantu nokuzokwenza bonke njengoba nakhu abakufunayo sebezokucosha eduze. Khona lapha ubukhona kwezitolo ezinkulu kuyozala imisebenzi yesikhashana kanye naleyo yenkontileka. Esinye sezitolo esikuzwelonke nesekuqinisekisiwe ukuthi sizotshala imali eNkandla ngu-Shoprite.
Ukuqinisekisa ukuthi umphakathi wakule ndawo kawugcini nje ngokuba ngabaqashwa, uMkhandlu ugxilisa izinhlelo zokuthuthukisa osomabhizinisi abasakhasa kanjalo nemifelandawonye ekhona endaweni. Kusuka ngowezi-2014 lo Mkhandlu wasebenzisana nesikhungo i-Small ngenhloso yokusabalalisa ulwazi kosomabhizinisi endaweni.
Kanti muva nje uMkhandlu ugxile ekuthuthukiseni imifelandawonye phakathi kwayo okukhona leyo engabalimi. Kubo uMkhandlu ufake isandla ngogandaganda. Ikhona naleyo ehweba ngokubhaka nakhona uMkhandlu ufake isandla ukuze bacoshe izifundo ezinzulu ngalo mkhakha kanye nezitofu. Ngokusho kukaNtuli uMkhandlu uhlose ukuthi le mifelandawonye izimele futhi kungabi ngabantu ababodwa abathola usizo.” Ngokuqonda isimo sobubha kanjalo nokuswelakala kwamakhono endaweni, njengoMkhandlu sinesifiso sokwelekelela abantu abaningi. Yikho sithi osesizakele akangabaleki kepha akabe yingxenye yethu njengoMasipala sikwazi ukuthuthukisa abanye.
UNtuli onguthisha ngokoqeqesho uthe uMkhandlu wakhe ubeka imfundo phambili njengoba ingaba yibhuloho lokuwelisa iningi lentsha nemindeni, ilisusa ebubheni kuya empilweni engcono. Ngokuzigqaja uthe “seziyabonakala izithelo”emizamweni yabo yokwelekelela kwezemfumdo. Lokhu uthe ukusho ngoba sebekhona abafundi abaphothule izifundo zabo emazingeni aphakeme ehlukene kuleli ngosizo loMkhandlu.
“Yize kube nesimemezelo semfundo yamahhala njengoMkhandlu siyaqhubeka nokwelekelela abafundi bethu ngoba siyazi ukuthi ukufunda akukhona ukukhokha imali yokungena egunjini lokufundela kuphela. Ezinye izidingo zibala izinsizakufunda nokunye, ngakho ngeke siyeke ukwenza okuhle,” kuphetha uNtuli.
Abafundi abalishumi abaqwaqwade amakhanda bonke abafundi bezikole zaseNkandla baklonyeliswe ngamalaptop kanye nezindondo. Kwathi iVelangaye High School, iBizimali High School kanye neLushaba Secondary School bahlonywa uphaphe lweGwalagwala ngokukhiqhiza imiphumela eseqophelweni eliphezulu iminyaka eminingi ilandelana.
IMeya ithe iphupho labo wukuba nohlelo eliyokwelekelela nakulabo abafisa ukujubalala ngemfundo beya phesheya kwezilwandle. Uthe ngalokho abakufisayo ekugcineni: “Esikukhulekelayo wukuthi lezi zingane zibuye kulo mphakathi onikele ngakho konke ukuba zibe yilokhu eziyikho ngakwezemfundo.”
Ingqalasizinda yomphakathi efana nezinkundla kanye namahholo yinto uMkhandlu waseNkandla oyibeke eqhulwini. Ngokusho kukaNtuli lokho kuyingxenye yentuthuko yezindawo zaseMakhaya. “ Akumele udaba lwentuthuko yezindawo zaseMakhaya kugcinwe ngokukhulunywa nje kepha kumele kubonakale ngengqalasizinda. NjengoMkhandlu yize inkece incane siyazama ukuncozula kokukhona ukuze kube khona okwenzekayo nokubonakalayo ngengqalasizinda,” kusho iMeya.
UNtuli wenze isibonelo ngokwakhiwa kwehholo laseNhlababo kuWadi-7 nathe kungeminye yemizamo yoMkhandlu yokusabalalisa ingqalasizinda njengesibonelo semizamo yoMkhandlu. Lesi sakhiwo esekuphendulwe isoyi ukuba sakhiwe kulindeleke ukuba umphakathi wendawo ukwazi ngisho nokwenza eminye yemisebenzi yezandla kuso. Khona lapho njengenhlalayenza amalungu omphakathi ayocosha imisebenzi. Kusekuyo ingqalasizinda uMkhandlu uyaqhubeka nokubonelela amalungu omphakathi ahlwempu ngokuningi okubalwa kukho izindlu.